Rotary Kudzosera Factory - China Rotary Retort Vagadziri uye vanotengesa
Mativi akapfapfaidza kudzokorora
Mvura pfapfaidzo yekudzivirira kutapudza
Iyo yemvura inoshambadza rotary sterilization retort inoshandisa kutenderera kwemuviri unotenderera kuita zvirimo kuyerera mupakeji. Pisa uye utonhorere neanopisa kupisa, saka iyo hwemvura uye inotonhorera mvura haingasvibise chigadzirwa, uye hapana mishonga yekurapa mvura inodiwa. Iyo nzira mvura inosaswa pamusoro pechigadzirwa kuburikidza nepombi yemvura uye mhezi dzinogoverwa mukudzosera kuzadzisa chinangwa chekuvharisa. Yakarurama tembiricha uye kumanikidza kudzora zvinogona kukodzera dzakasiyana siyana zvakapakurwa zvigadzirwa.
Kunyudza kwemvura kutenderera kunodzosera inoshandisa kutenderera kwemuviri unotenderera kuita zvirimo kuyerera mupakeji, panguva iyi fambisa iyo nzira mvura yekuvandudza kufanana kwetembiricha iri mukudzosera. Mvura inopisa yakafanogadzirirwa mutangi yemvura inopisa kutanga iyo sterilization maitiro pane yakanyanya tembiricha uye kuzadzisa iyo yekukurumidza tembiricha ichikwira, mushure mekudzivirira, mvura inopisa inodzokorodzwa uye ndokupomberwa kudzoserwa kune inopisa mvura tangi kuzadzisa chinangwa chekuchengetedza simba.
Steam uye kutenderera kudzora ndeye kushandisa kutenderera kwemuviri unotenderera kuita zvirimo kuyerera mupakeji. Izvo zviripo mukuita kuti mweya wese ubviswe kubva mukudzoka nekuzadza ngarava nemhepo uye uchibvumira mweya kuti ubude kuburikidza nemavharuvhu emhepo.Hapana kunyanyisa kudzvinyirira panguva yezvikamu zvekubvisa zveichi chiitiko, sezvo mweya usingatenderwe kupinda mukati ngarava chero nguva panguva ipi neipi yekudzvinyirira nhanho. Nekudaro, panogona kuve nemhepo-kudzvinyirira kunoiswa panguva yekutonhora matanho ekudzivirira mudziyo deformation.